Xogta urursan ee waxqabadyada CISP
Dhammaan 2016 2017 2018
Dhammaan Dhammaan Waxbarashada Caafimaadka Ilaalinta Maciishadda Biyaha iyo fayadhowrka
Dooro Gobol Dhammaan Banadir Galgaduud Hiraan Mudug
Dooro Degaan Dhammaan
Dooro Goob Dhammaan
Dhammaan Weli socda La-dhammeystirey Maaliyad looma hayo
Wararka hawsha waa xog urursan oo kuu oggolaaneysa in aad baarto waxqabadyada kala duwan ee CISP ay ka waddo Soomaaliya. Nidaamka waxaa looga jeedaa in uu noqdo meel lagu soo bandhigo warar iyo qoraallo wata sawirro, xaqiiqooyin iyo tirooyin. Ujeeddada Wararka Hawsha waa in lagu wanaajiyo xisaabtanka (ku xir Dadaalkeenna Xisaabtanka) iyo in lagu xoojiyo daahfurnaanta loo muujiyo dadka Soomaaliyeed.
Haddii aad daneyneyso degaan gaar ah, waxa aad xulan kartaa gobollo iyo/ama degaamo, waxaana aad ka ogaan kartaa waxa ay CISP ka qabaneyso halkaa. Baaritaankaaga waxaa sidoo kale ka mid ahaan kara waxyaabo kale, sida: waaxaha wax laga qabanayo, sanadka, iyo xaaladda waxqabadyadu sida ay tahay. Mustaqbalka, xogta urursan waxaa ay sidoo kale muujin doontaa baahiyo gaar ah oo CISP ay soo ogaaneyso oo ay kala soconeysa degaannada ay ka shaqeyso.
Haddii aad doonto, waxa aad ka faalloon kartaa waxqabad gaar ah, adiga oo si toos ah ugu qoraya bogga wararka (update page) adiga oo gujinaya comment/faallo. Waxaan rumeysannahay in ka-qaybgalkaaga uu muhiim u yahay wanaajinta hawl-qabadka ururka, sidaa daraaddeedna waxa aan soo dhoweyneynaa jawaab-celintaada iyo talooyin-qaadkaaga. Si aad u soo gudbiso faallooyinkaaga, waxaa aad sidoo kale buuxin kartaa foomka jawaab-celinta ee internetka laga buuxiyo. (ku xir foomka jawaab-celinta) Qaybtan waa hawl weli socota si joogto ah ayaana macluumaad kale loo gelin doonaa. Waxaan rajeyneynaa in ay shaqeyn doonto laga bilaabo 2012ka.